यी हुन् निद्रा नपुग्दा निम्तने प्रमुख ५ स्वास्थ्य समस्या – Health Post Nepal
यी हुन् निद्रा नपुग्दा निम्तने प्रमुख ५ स्वास्थ्य समस्या
२०७८ फागुन २९ गते ११:४७
काठमाडौं–तपाईं निद्रा पूरा हुने गरी सुत्नुहुन्न? या दैनिक ७ घण्टाभन्दा कम सुत्नुहुन्छ? यदि यस्तो हो भने ख्याल गर्नुहोस्, यसले तपाईंको मस्तिष्कमा नराम्रो असर पर्नसक्छ।
निद्रा हाम्रो शरीरका लागि अत्यन्त आवश्यक कुरा हो। यदि ७ देखि ८ घण्टासम्म सुत्नुहुन्छ भने मोटोपना, हृदयरोग, डिप्रेसनजस्ता समस्याबाट मुक्ति पाउन सकिन्छ। पूरै निद्रा नसुत्ने मानिसहरुले पछि गएर शारीरिक तथा मानसिक समस्याको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ।
कम निद्राका कारण प्रतिरोधी क्षमता कमजोर पर्नसक्छ भने मस्तिष्कमा असर पर्दा मानसिक समस्या पनि निम्तन्छ र शरीरमा विभिन्न रोगहरुले घर बनाउँछ। त्यसैले कम निद्राले कस्तो असर पर्छ त?
निद्रा पुग्नेगरी नसुत्दा यसको असर दिमागमा पर्छ । सोच्ने र बुझ्ने क्षमता कमजोर हुन्छ। डिप्रेसनको कारक मानिएको मोटोपना बढ्छ। मुटु, दिमाग र तौलमा नकारात्मक असर पर्छ।
निद्रा नपुग्दाका दुष्प्रभाव
कम सुत्दा शरीरमा ऊर्जाको कमी हुन्छ, जसबाट मस्तिष्कले पूर्ण रुपमा कम गर्न पाउँदैन। व्यक्तिगत र व्यायसायिक जीवनमा समस्या निम्तन्छ।
निद्रा पूरा नहुँदा डिप्रेसनको लक्षण देखिनसक्छ। अनिद्राको समस्या र डिप्रेसनबीच गहिरो सम्बन्ध हुुन्छ। डिप्रेसनको कारण अनिद्राको समस्या हुन्छ र अनिद्राको कारण डिप्रेसन हुनसक्छ। त्यसैले समयमै सुत्ने बानी बसाल्नुपर्छ र दैनिक शारीरिक अभ्यास गर्नुपर्छ।
निद्रा पूरा नहुँदा व्यक्तिले आफ्नै व्यवहारमा परिवर्तन आएको महसुस गर्नसक्छ। रिस उठ्ने र चिडचिडाहट (इरिटेशन) हुने हुनसक्छ। व्यवहारमा परिवर्तन आएको महसुस भए पानी पिउने र श्वासप्रश्वासको अभ्यास गर्नुपर्छ।
३. स्मरणशक्ति कमजोर हुनु
कम सुत्ने मानिसहरुमा स्मरणशक्ति कमजोर हुने समस्या देखिनसक्छ। यदि अनिद्राको समस्या छ भने चिकित्सकको परामर्श लिनुपर्छ र योगा तथा ध्यान गर्ने बानी बसाल्नुपर्छ।
४. ध्यान केन्द्रित गर्ननसक्ने समस्या
दैनिक ७ घण्टाभन्दा कम सुत्नेहरुमा ध्यान केन्द्रित गर्ने क्षमता कम हुन्छ। यसको अर्थ हो–कुनै पनि कुरामा ध्यान केन्द्रित गर्न नसक्नु। यसको परिणामस्वरुप कुनै पनि चिज स्मरण गर्न या सिक्न असमर्थ हुन्छ।
यदि लामो समयसम्म निद्रा पूरा नगर्ने हो भने मानिस मनोरोगको शिकार हुनसक्छ। विभिन्न प्रकारका फोबियाले दिमागमा घर बनाउँछ। डिप्रेसन, एन्जाइटीजस्ता स्वास्थ्य समस्या निम्तन्छन्।
कसरी पूरा गर्ने निद्रा?
यदि निद्रा नलाग्ने समस्या छ भने समाधानका लागि यसो गर्न सकिन्छः
दैनिक शारीरिक अभ्यास गर्नुहोस्।
आफ्नो डाइटमा फाइबरयुक्त खाना समावेश गर्नुहोस्।
राति सुत्नुअघि बेसार मिसाएको दूध मिसाउनुहोस्।
नियमित रुपमा ध्यान र गहिरो श्वास लिने अभ्यास गर्नुहोस्।
डिस्क्लेमरः आफ्नो स्वास्थ्य समस्याको समाधानका लागि सम्बन्धित चिकित्सकको परामर्श /सहयोग लिनुहोला।